'Gacaliyaheyga iskama bixin karo gabaatiga ay reerkeyga rabaan' - BBC News Somali
'Gacaliyaheyga iskama bixin karo gabaatiga ay reerkeyga rabaan'
Lahaanshaha sawirka EriStudios
Image caption Angela iyo seygeeda Geoffrey
"Ilamaha habboona lacagta gabaatiga ah ee ay qoyskeyga ku rabaan arooskeyga... Geoffrey ma awoodo inuu bixiyo kharashkaas", sidaas waxaa tiri Angela, oo ah gabar reer Ghana ah oo ku dhalatay Britain, mar ay ka hadleysay dhaqanka qoysaska ku nool dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
"Taas baddalkeeda waxaan jeclahay fikirka ku saabsan in qoyska gacaliyaheyga ay u maleeyaan inay hanti adduun soo raadsaneyso haddii aan aniga ku biiro".
Gabaatiga waa lacagta ay qoyska ninka siiyaan reerka gabadha, marka uu arooska dhacayo.
Meelaha qaar gabaatiga waxaa loo bixiyaa lacag ahaan ama hadiyad ahaan, ama labadaba waa la isku daraa.
Dhaqamada bulshooyinka Afrika qaarkood, gabaatiga waxaa la bixiyaa hal mar laakiin in qeyb qeyb loo bixiyo waa dhif.
Arrintan waxaa sidoo kale aad looga dhaqmaa dalalka Thailand, Shiinaha iyo jasiiradda Papua New Guinea.
Angela waxay iyada la tahay qaaradda ay kasoo jeeddo kaliya looga hoggaansan yahay dhaqankaas.
"Dadka reer Afrika way ku faraxsan yihiin Afrikaannimadooda. Waxaa jiray xilli aysan cidna farxad galineynin in Afrikan la ahaado. Hadda, waad u jeeddaa dhaqanka wanaagsan ee Afrika", ayey tiri.
Geoffrey hadda waa seygeeda, isaga qudhiisuna waa nin reer Ghana ah oo ku dhashay Britain. Wuxuu qoyskeeda ku qeexay mid wax weyn u taray oo mahadcelin mudan.
'Adiga iib ma tihid, qof ku gadan kara ma jiro'
Hal isbuuc ka hor inta aan sharciga UK la isugu guurinin ka hor, Geoffrey iyo Angela waxay dhigteen arooska dhaqanka ah ee waddankooda Ghana.
Intii ay xafladdaas socotay ayaa lacagta gabaatiga ah la guddoonsiiyay qoyska Angela.
Laakiin lammaanahan waxay xoogaa yar wax ka baddaleen dhaqanka: "Lacagta gabaatiga ah ee la bixiyay waa mid hadiyad ahaan dib noogu soo laabaneysa annaga oo lamaanaha ah", ayey tiri Angela.
"Hooyadey mar kasta mowqifkeeda wuu ii caddaa, markii ugu horreysayna waxay igu tiri: 'Adiga iib ma tihid, qof ku gadan kara ma jiro'."
Qiimaha gabaatiga wuu sii kala duwan yahay. Geoffrey wuxuu yiri: "Wuxuu ahaa mid iska dhexdhexaad ah. Wuxuu ahaa boqollaal".
Laakiin Nin iyo xaaskiisa, oo daggan magaalada Derby, laguna kala magacaabo Blessing iyo Chelsea waxay arrintan u wajaheen qaab sidaas ka duwan.
Dhaqamo cajiib ah oo haweenka gaajo ku dila markuu seygooda dhinto
Image caption Blessing (bidix) wuxuu sheegay inuu 7 maalmood isbuucii u shaqeynayay, si uu isaga bixiyo lacagta gabaatiga
Blessing, oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Zimbabwe, wuxuu sheegay inuu shaqo labaad u raadsaday si uu awood ugu helo kharashka gabaatiga. "Waxaan iska dhihi karaa waa inaad lacag meel kusii keydsatid, si aad kharashkaas isaga dabartid".
Markii hore, Chelsea way ka laba labeyneysay inay gasho aroos dhaqanka waafaqsan, sababtoo ah aabaheed horay ayuu u dhintay.
"Waxaan isdhahay... yaa qaadan doona lacagta? Waayo inta badan waxay arrinta ku saabsan tahay aabaha iyo hooyada. Sidaas awgeedna arrinta oo dhan ilama saxneyn", ayey tiri.
Laakiin Blessing ayaa ku qanciyay xaafkiisa inaysan dhaqanka ka weecanin.
Isagoo xitaa ay dhib ku ahayd lacagta badan ee uu gabaati ahaanta u bixinayay, haddana wuxuu u arkayay mid faa'iido leh.
Wuxuu sheegay in haddii uusan bixin lahayn gabaatiga ay ku adkaan lahayd inuu wajigiisa hor geeyo qoyska ay kasoo jeeddo xaaskiisa.
Ma cadda xilliga uu Afrika ka billowday gabaatiga gabdhaha laga bixiyo. Laakiin dalal badan waxaa gabaatiga laga dhigaa lacag caddaan ah.
Arrinta cajiibka ahna waxay tahay in dalalka oo dhan ay ku kala duwan yihiin qabka loo bixiyo gabaatiga iyo qiimaha laga dhigo.
Evelyn Schiller waxay dalka Uganda ka sameysay ol'ole ay uga soo horjeeddo gabaatiga.
Waxay aaminsan tahay in ujeeddada dhaqankaas ay isbaddashay saddexdii jiil ee ugu dambeysay.
"Maanta fiiri sida ay xaaladda tahay, iyo sida ay hadiyaddu u egtahay. Wuxuu ahaa kharash sharaf ku dhisan, hadda sharaftii waa laga tagay waxaana lagu magacaabaa qiimaha aroosadda", ayey tiri Evelyn .
Sanadkii 2015-kii, maxkamadda ugu sarreysa dalka Uganada ayaa xukuntay in qiimaha aroosadda ama gabaatiga uu yahay mid qofkii doona uu dhaqan ahaan u raaci karo, qofkii doonana uu isaga tagi karo, laakiin haddii ay lamaanuhu is furaan inaan dib loo dalban karin kharashkaas.
Gabaatiga wali waa laga taageeraa Uganda, sababtoo ah waxaa loo arkaa hab isku xira bulshooyinka kala duwan.
Image caption Tolly T waxay aaminsan tahay in gabaatiga uu muujinayo lahaansho
Gabadha wariyaha ah ee lagu magacaabpo Tolly T, oo ku dhalatay UK balse kasoo jeedda Nigeria, waxay su'aal galisay in dhaqanka gabaatiga uu iyada u shaqeyn karo.
"Sida iska cad... waxay iila muuqataa lacag la igu siinayo gabadheyda. Waxay u egtahay sidii wax lagaa lahaanayo oo kale", ayey tiri.
'Haddaan nahay Britishka madow waxaan hadda heysanaa dhaqan noo gaar ah'
Gabadhan ayaa aaminsan inay habboon tahay in dhaqanka lagu saleeyo agabka haweeneyda aroosadda kaliya.
"Hadda waxaa dhaqanka laga dhigay wax ku xiran qofka naftiisa, tusaale ahaan, "Aniga kharash noocaas ah uma qalmo sababtoo ah jaamacad ma dhiganin", ama "Aniga ma helo lacagta intaas la eg".
"Markii si guud loo eegana maxaa arrintaas ka khuseeya in la noqdo xaas wanaagsan?".
"Ilama aha inay taas annaga nala shaqeyn karto, haddii aan nahay Britishka madow, waxaan leenahay dhaqan noo gaar ah", ayey tiri.
"Waxaan dhaqamadeenna qaar uga dayaneynaa Afrika, kuwo kalena Britishka ayaan ka qaadaneynaa. Marka waxaan sameysannay dhaqan hoosaad aan su'aalo ku galinno wax kasta, ka dibna waan qaadannaa wixii micno noo sameynaya, ayey tiri Tolly T.